Filtrer les éléments par date : jeudi, 30 janvier 2020
jeudi, 30 janvier 2020 21:09
Maevatanana: Niakatra 200 Ar isaky ny kilao ny vary sy ny siramamy
Nisy fiakarany 200 Ar isaky ny kilao ny vary sy ny siramamy eto Maevatanana, tsy nisy fiovany kosa ny vidin'ny lafarina.
jeudi, 30 janvier 2020 18:29
Fanorenana tanàna vaovao sy toeram-ponenana: Mila vokatra mivaingana avy amin’i Zasy Angelo ny filoha Rajoelina
Ambohitrimanjaka sy ny fanatanterahana ny tetikasa Tana-Masoandro avy hatrany no mby tao an-tsain’ny maro vao nandre omaly ny namoronana ministera iray misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram- ponenana, ka nanendrena an’i Zasy Angelo, hitantana an’izany ministera izany.
Nahitsy ny tenin’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny filankevitry ny minisitra voalohany omaly, andro nananganana ny governemanta faharoa hanatanteraka ny IEM, fa matoa natao mitokana ny minisitra lefitra misahana ny fanorenana tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia ilaina ny fanafainganana sy ny fandrindrana ny asa ho haingana kokoa ary mila vokatra mivaingana.
Governemanta vaovao: Vitaina ato anatin’ny 48ora ny famindram-pahefana
Nanome toromarika ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, fa dia vitaina anio alakamisy sy rahampitso zoma ny fifamindrampahefana eo amin’ireo minisitra teo aloha sy ireo vao niditra, ary mila mandray andraikitra avy hatrany ireo minisitra rehetra mandrafitra ny governemanta tarihin’ny Praiminisitra Christian Ntsay.
jeudi, 30 janvier 2020 15:01
HETRAPHONE: Fandoavana hetra amin'ny alalan'ny finday
Azo atao ankehitriny ny mandoa hetra amin’ny alalan’ny finday, na MVola na Orange Money na Airtel Money.
Mbola ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina ihany anefa aloha no misitraka io fomba fandoavam-bola io fa mbola miandry ny any amin'ny faritra hafa.
Tsy misy sarany kosa fa maimaim-poana ny fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny finday.
jeudi, 30 janvier 2020 14:51
Air Madagascar: Hampiato vonjimaika ny sidiny miazo an’i Guangzhou
Hiato vonjimaika manomboka ny 1 febroary ka hatramin’ny 1 martsa 2020 ny sidin’ny Air Madagascar miazo an’i Guangzhou. Noraisina ny fepetra manoloana ny fisian’ny valan’aretina « coronavirus » mamono olona maro any Chine.
Nanome toromarika hentitra ny governemanta ny filohan’ny Repoblika nandritra ny filankevitry ny minisitra voalohany omaly, fa mila apetraka sy hamafisina ny fanaraha-maso ny sisin-tany manoloana ny fihanaky ny valan’aretina avy any Chine ary hamafisina izany manerana ireo seranana rehetra na seranan-tsambo na seranam-piaramanidina.
jeudi, 30 janvier 2020 14:36
Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Liva: Eo an-tsorony ny famerenana ireo « Nosy Malagasy »
Tontosa androany maraina ny famindram-pahefana teo amin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, sady nisahana vonjimaika ny asa aman’andraikitry ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny lehiben’ny diplaomasia malagasy vaovao, Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Liva.
Naneho ny fahovononany amin’ny hanamafisana orina ny diplaomasia Malagasy ka nanamafy fa tsy handraraka ilo mby an-doha amin’ny andraikitra ankinina aminy Dr Tehindrazanarivelo, ary nankasitraka ny Praiminisitra tamin’ny fitantanana ny ministera.
jeudi, 30 janvier 2020 08:48
Fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny Governamanta
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA 2020 -70 ROAPOLO SY ROA ARIVO TSIPIKA FITOPOLO
Anendrena ireo mpikambana ao amin'ny Governamanta
jeudi, 30 janvier 2020 08:46
Carlton: Andro iraisam-pirenena ho an'ny fadin-tseranana
Notanterahina teny amin'ny Carlton Anosy, ny talata 28 janoary teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fadin-tseranana, izay notarihin'ny minisitry ny vola. Maro ireo olona nasaina nanatrika izany.